ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒလေးတခု.. ဆိုတော့ ဖြစ်စေချင်တာတွေ ကို ဖေါ်ထုတ်ရေးသားမိတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတခုပါပဲ ။ ခံစားချက်ခြင်း မတူကွဲပြား ဖြစ်နေကြပါလိမ့်မယ် ။ မတူတဲ့ခံစားချက်များထဲမှ တူညီတဲ့ ဆန္ဒလေးတခုတော့ ရှိနိုင်မှာပါ ။
ဒီနေ့ဒီအချိန်ရောက်လာရင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၄ နှစ်က အဖြစ်အပျက်တွေကို မနေ့တနေ့ကလိုပဲ တနုံ့ နုံ့ နဲ့ ခံစားနေမိဆဲပါ ။ အတိတ်ဆိုတာ ကျန်နေခဲ့ပြီ ဖြစ်ပေမဲ့ သမိုင်းစစ်မှန် ဆိုတာကိုတော့ မမေ့စကောင်း မဖျောက်ဖျက်စကောင်း မို့ပြန်လည် ခံစား စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိဆဲပါ ။ ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ ခေတ်ကြီးရောက်လာတဲ့ အချိန်အခါမှာ အင်တာနက်များ အလွယ်တကူချိတ်ဆက်လာနိုင်တဲ့အချိန်အခါမှာ ဟိုးယခင် တကယ့်အဖြစ်အပျက်များ မျက်မြင်မကြုံတွေ့ လိုက်ရတဲ့ သွေးပျက်ဖွယ်ပုံရိပ်များကို ကြည့်မိတဲ့ အခါတိုင်းမှာလည်း ရင်နာခံစားနေမိဆဲပါ ။ တည့်တည့်ပစ်မယ် ဆိုတဲ့ ချိန်းခြောက်မိန့်ခွန်းကို ပြန်လည် နားထောင်မိလိုက်တိုင်း ဒေါသတွေ ဆူပွက်နေရဆဲပါ ။ ဒီတော့ အတိတ်ဆိုးကို ဘယ်လို ဖြေဖျောက်နိုင်ကြမလည်း လို့စဉ်းစားမိလာတယ်..
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရာဇဝင် သမိုင်း 8888 အကြောင်းကိုတော့ အများသိပြီးဖြစ်တာမို့ရှည်ရှည်ဝေးဝေး ထပ်မပြောလိုတော့ပါ ။ ဒီလို 8888 အဖြစ် နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင် အဖြစ်အပျက်မျိုးဟာ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှာ လည်း ဖြစ်ပျက်ခဲ့ဖူးတယ် ။ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လို့ ရအောင် ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုပဲ ပြောပြပါမယ်။ အဲ ဒါကတော့ 228 Massacre( 二二八事件 , 二二八大屠殺) လို့ခေါ်တွင်တဲ့ အဖြစ်အပျက် ပါ ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆၅ နှစ်အကြာ၊ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၇-၂၈ နေ့ မှာ အာဏာရပါတီ Kuomintang(KMT) မှ ၊ အတိုက်အခံများအား သူပုန် လို့စွပ်စွဲ ချေမှုန်းမှုကြောင့် အတိုက်အခံ ပြည်သူအများ လူပေါင်း တစ်သောင်းကျော်( တချို့စာရင်းအရ သုံးသောင်းကျော် ) သေဆုံးခဲ့ရတယ် ။ အဲဒီ လူထု အထဲမှာ ပညာတတ် ဆရာဝန် ၊ ရှေ့ နေ့၊ ကျောင်းသား အများအပြားလည်း ပါဝင် ခဲ့တယ်။
နောက်ပိုင်း ဒီမိုကရေစီ ဖေါ်ဆောင်လာ ပြီး တိုင်းပြည် ပြောင်းလဲ တိုးတက်ခဲ့တယ် ။ ဒါပေမဲ့ ဒီအဖြစ်အပျက် ကို သူတို့ရာဇဝင်မှာ ဖျောက်ဖျက်မထားခဲ့ဘူး ။ ..သမ္မတ Lee Teng-hui လက်ထက် မှာ ၁၉၉၅ ခုနှစ် မှ စပြီး အဲဒီ နေ့ကို
Peace Memorial Day ( 和平紀念日) လို့ပြောင်းလဲ ခေါ်ဆိုခဲ့တယ်။ နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း ၊ နှစ်ပတ်လည်နေ့ရောက်တိုင်း .. သမ္မတ ကြီး ကိုယ်တိုင် 228 ပန်းခြံ မှာ ကျဆုံးခဲ့သော နိူင်ငံသား အညတြ သူရဲကောင်းများကို ဦးညွှတ် အလေးပြု ကြတယ် ။ တချိန်က ထိုသူတွေကို ခေါ်ဝေါ်ခဲ့တဲ့ သူပုန် ဆိုတဲ့ မှားယွင်းတဲ့ အခေါ်အဝေါ်ကို ပပျောက်စေခဲ့တယ် ။ ကျန်ရစ်သူ မိသားစုများကို ဝန်ချတောင်းပန်ကြတယ်။ကျဆုံးသွားသူတွေရဲ့ အမည် စာရင်းများ ပြုစု ပြီး ၊ သူရဲကောင်းလက်မှတ်တွေ ပေးအပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒါတွေကို ခုချိန်ထိ ဆောင်ရွက်နေကြရဆဲပါ ။ အဲဒီနေ့တွေမှာ ..ကျန်ရစ်သူမိသားစု တချို့ မှ မကျေနပ်မှု၊ ဒေါသပေါက်ကွဲ မှု ၊ဆဲဆိုမှုတွေကို ခေါင်းငုံ့ ခံ တောင်းပန်နေကြရတုံးပါပဲ ။ တနှစ်ကများဆိုရင် လက်ရှိသမ္မတကြီး Ma Ying-jeou ကို တံတွေးနဲ့ ဝင်ထွေးတဲ့သူကိုတောင် တီဗီသတင်း၊ သတင်းစာ တွေမှာ တွေ့ လိုက်ရတယ် ။ ဘေးက သက်တော်စောင့်တွေကတော့ ဝင်ပြီးထိန်းကြ ဆွဲကြပေါ့ ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလူကို ဖမ်းချုပ်မထားပါဘူး ။ အစိုးရက ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးခဲ့ပါတယ် ။
ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီကိစ္စဟာ လက်ရှိသမ္မတကြီး ပြုခဲ့ ကျုးလွန်ခဲ့တဲ့ အစုလိုက်အပြုံလိုက် လူသတ်မှုကြီးလည်း မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး ။ သူ့ အရင် ၆၅ နှစ်တုံးက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက် တခု ။ ဘာဖြစ်လို့နောက်ပိုင်းဆက်ခံခဲ့တဲ့ သမ္မတတွေ ကိုယ်တိုင်က ခုလို ဝန်ချတောင်းပန်နေရဆဲ ဆိုတာ အကြောင်းရှိပါတယ် ။ အတိတ်က ကြောက်ရွံ့ မှု ၊ အမှောင်ချခြင်းခံခဲ့ရမှု ၊ မတရားကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ အမှူတွေတွေအတွက်၊ အမှန်တရားကို ဖေါ်ထုတ်ဖို့ ဆိုတာဟာ ဒီမိုကရေစီအစိုးရရဲ့ အချက်ပြ တာဝန်ဖြစ်ပါတယ် တဲ့ ။ သမိုင်းဆိုတာ ဖျောက်ဖျက်လို့မရစကောင်းပါဘူး လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ မှားခဲ့တဲ့ ပြစ်မှုကြီးအတွက် ၊ တောက်ပတဲ့ အနာဂါတ်ခရီးဆီ ဆက်လက် လျှောက်လှမ်းနိုင်ဖို့အတွက် အတိတ်က အမှောင်ရိပ်ဆိုးကြီးကို ချေဖျက်ပေးဖို့နောင်လာမဲ့ အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရအဆက်ဆက် မှာလည်း တာဝန်ရှိပါတယ် တဲ့ ။ အတိုချုပ်ဆိုရရင်တော့. .. အတိတ်က အမှားအယွင်းတွေကို သင်ခန်းစာယူပြီး ၊တိုးတက်သာယာတဲ့ အနာဂါတ်ကို လျှောက်လှမ်းကြဖို့ ပြောကြားခဲ့တာပါပဲ ။
"We once lived in fear and gloom, but democracy arose likeabeacon, to illuminate the dusty pages of the past, expose the truth, and preserve an indelible record of our historical experience." သတင်းအပြည့် အစုံ သေချာကြည့်လိုရင်တော့ ဒီနေရာမှာ ဆက်ကြည့်နိုင်ပါတယ် ။
ဒါကို ကြည့် ပြီး ကိုယ့်မွေးရပ်မြေ အမိမြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အလားတူ အဖြစ်ဆိုးကြီးများ ကို အတိတ်ဆီမှာပဲ မှုန်ဝါးစွာ ချန်ရစ်ထားခဲ့ခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲ ၊ နိုင်ငံတော်မှ ဦးစီးပြီး အထိမ်းအမှတ် မျိုး၊ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့ဆန္ဒဖြစ်လာမိတယ် ။ ငွေ ၁၀ သိန်း ပေးယုံ နဲ့ သင်ပုန်းချေဖို့ ဆိုတာကတော့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ဖြစ်နိူ်င်ဘွယ်ရာ မရှိပါဘူး ။ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေ ပေးဆပ်ခဲ့ရတဲ့ အသက် သွေး ချွေး ဘဝ တွေ အတွက် ထိုက်သင့်တဲ့ ဝန်ချ တောင်းပန်မှုများ ၊ အထိမ်းအမှတ် ပွဲများ၊ အညတြသူရဲကောင်းဗိမ္မာန် ၊ ပန်းခြံ စသဖြင့် အခင်းအကျင်းမျိုးများ ပေါ်ပေါက်စေချင်ပါတယ် ။ “ လွတ်လပ်မှ အမျှဝေပါ” လို့ပြောကြားရင်း အသက်ပေးသွားခဲ့ကြသူတွေရဲ့ဆန္ဒအတိုင်း ..အားလုံးအတွက် အမျှပေးဝေနိုင်စေချင်ပါတယ် ။
ဒါကတော့ 228 အထိမ်းအမှတ် ပန်းခြံ နဲ့ ကျောက်တိုင်ပါ ။ သမ္မတ ရုံး နဲ့မနီးမဝေး ထိုင်ပေ မြို့ ထဲ မှာတည်ဆောက်ပေးထားပါတယ် ။
၂၀၁၂ /၂/၂၈ တွင် သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင် ၂၂၈ အထိမ်းအမှတ်ကျောက်တိုင်မှာ ပန်းခွေချ အလေးပြုနေပုံ ။
ကျန်ရစ်သူ ဆွေမျိုးသားချင်းများအား တဦးချင်း ရင်းနှီးစွာ နှုတ်ဆက်နေပုံ။
စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီကို အမှန်တကယ် ဖေါ်ဆောင်နေတယ်ဆိုရင်ဖြင့် ၊ လက်ရှိ ဖမ်းဆီး အကျဉ်းချ ခံနေရဆဲဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အားလုံးကို ချွင်းချက် မရှိ အမြန်ဆုံး ပြန်လွှတ်ပေးသင့်တယ် ။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများအပေါ် ဖိနှိပ် တိုက်ခိုက်နေဆဲ စစ်ပွဲများကို အမြန်ဆုံး ရပ်စဲပေးသင့်တယ် ။ ဒါတွေက ချက်ချင်း ပြုလုပ်ပေးလို့ ရတဲ့ အရာတွေပါ ။
ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး ၊ စီးပွားရေး၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး စတဲ့ ဘက်ပေါင်းစုံ နိုင်ငံ တိုးတက် ပြောင်းလဲရေး ဆိုတာကတော့ ခု ရေတွင်းတူး ခုရေကြည်သောက်ချင်လို့မရဘူး ဆိုသလို .. နတ်ရေကန်ထဲ ပစ်ချလိုက်သလို .. ချက်ချင်းကြီး ဖေါ်ဆောင်နိုင်မဲ့ အရာတွေ မဟုတ်လို့ .. တဆင့်ချင်းစီ ..လှမ်းတက်ကြရမှာ မို့ဆန္ဒတွေ မစောသော်လည်း .အရှိန်အဟုန် နဲ့ ရှေ့ သို့ ချီတက်ကြရပါမယ် ။
ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒလေးတခု .. ပီပီပြင်ပြင် ဖြစ်လာနိုင်စေဖို့.. ဆုတောင်းနေရုံ နဲ့တော့ ဖြစ်လာမယ် မဟုတ်ပါဘူး ။ အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရ နဲ့ အုပ်ချုပ်ခံသူ ပြည်သူ တွေ အားလုံး ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူလက်တွဲလျှောက်လှမ်းကြ မှ သာ ၊ အဖက်ဖက်က နှစ်ပေါင်းများစွာ နောက်ကျကျန်နေခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ အမိ မြန်မာနိုင်ငံကြီးဟာ ကမ္ဘာ့ အလယ်မှာ ပြန်လည် ဦးမော့လာနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
:kiki : at 8/08/2012 11:59:00 AM
ဂိမ်း နဲ့ ဂန့် 
အကြိတ်အနယ် အသည်းအသန် အပြင်းအထန် အသေအကြေ အသေအလဲ ..ဒီစကားလုံး အားလုံးဟာ ပြင်းထန်စွာ ပြုလုပ်မှုတရပ်ကို ဆိုလိုရင်းဖြစ်ကြောင်း သိကြမှာပါ ။ အသေအကြေ အသေအလဲ ဆိုတဲ့အထဲက “သေ” ဆိုတဲ့ စကားလုံး တလုံးပါရှိနေတာမို့ပိုပြီး ပြင်းထန်တဲ့ သဘောများရှိနေမလား လို့စဉ်းစားစရာ ဖြစ်ရပ်တခု မကြာမှီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ဖြစ်လာခဲ့တယ် ။ တကယ့်ကို အသေအကြေပါပဲ ။ အဖြစ်ကဒီလို..
ဒီနိုင်ငံမှာတင်မဟုတ်ပါ ။ဒီခေတ်ကြီးမှာ အီး ခေတ်လို့ ဆိုတဲ့ အတိုင်း လူတိုင်းလိုလို အတွက် အရာရာမှာ အီး နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ အသုံးအဆောင်များစွာ နဲ့ ခွဲခြားလို့ မရနိုင်လောက်အောင် တွယ်နှောင်ရစ်ပတ်နေလျှက်ရှိကြပါပြီ ။ အင်တာနက်ခေတ် ဆိုတော့ ဂိမ်းကစားနည်းမျိုးစုံမှာတောင် တဖက် နဲ့ တဖက် လူမမြင် လူမသိကြပေမဲ့ ၊အွန်လိုင်းကနေ ဆော့ကစားကြ လို့ ရတယ် ။ ဒီအတိုင်း ကစားရတာ ငြီးငွေ့ လာကြ လို့ လားတော့ မပြောတတ် ၊နောက်ပိုင်းကျတော့ အလောင်းအစား ပုံစံမျိုးနဲ့ ဆော့ကစားကြတယ် ။ လောင်းကစားဆန်ဆန် ဂိမ်းမျိုးစုံကိုထွင်ကြတဲ့ ကုပ္မဏီတွေကလည်း သူ့ ထက်ငါ အပြိုင်အဆိုင် ရင်ဖို ရင်ထိတ်စရာ ကစားနည်းတွေကို တီထွင်ထုတ်လုပ်လာကြတော့ အဲလိုဂိမ်းတွေကို စွဲစွဲလန်းလန်း ဆော့လာကြသူများလည်း တိုးပွားလာကြတယ်ပေါ့ ။ တချို့ လူငယ်တွေများဆို ကျောင်းပြေးပြီးတော့ အင်တာနက်ဂိမ်းဆိုင် အင်တာနက်ကော်ဖီဆိုင်တွေမှာ အချိန်ဖြုန်း ငွေဖြုန်း လာကြတယ် ။ အိမ်က မိဘတွေခမျာမတော့ ငါ့သားလေး ငါ့သမီးလေး ကျောင်းတက်တယ် စာကြိုးစားတယ် ထင်နေကြမှာ ။
ဟိုးတလောက သတင်းထဲမှာ ပါလာတဲ့ အသေအလဲ ကစားတဲ့ အဖြစ်ရဲ့ အကျဉ်းချုပ်ကတော့ အသက် ၂၃ နှစ် အရွယ် လူငယ်တယောက်၊ နှစ်သစ်မကူးခင် ကာလအတွင်းမှာ အလုပ်ပြုတ်သွားခဲ့ပြီးနောက် စိတ်ပြေလက်ပျောက်လား ဒီကစားနည်းကို အသေစွဲနေလို့ ပဲလား မသိ ။ သူ ဆော့နေကြ ဂိမ်းဆိုင်ကို လာပြီး နေ့မအိပ် ညမအိပ် ဂိမ်းဆော့ပါသတဲ့ ။သူဆော့တဲ့ ဂိမ်းအမည်က “ League of Legends，”အတိုကောက် LOL လို့ခေါ်ကြ သတဲ့။ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ကစားနည်းကြောင့်လား ၊ သူ့ နဂို ရောဂါအခံကြောင့်ပဲလား မသိ ။ ၂၄ နာရီနီးပါး ဂိမ်းဆော့နေလိုက်တာ ... သူ့ ဘေးမှာ ဝင်ဆော့နေကြသူတွေ သာ ပြောင်းသွားတယ် သူကတော့ ထိုင်ရာမထ ၊ နောက်ဆုံးကျမှ ဆိုင်က အလုပ်သမားတယောက် သတိထားကြည့်မိချိန်မှာ သူ အသက်ပျောက်နေခဲ့ပြီ ။ တောင့်တင်းညိုမဲနေပြီ ။ ထိုင်ခုံပေါ် မှီရက် ဘယ်လက်က ကီးဘုတ်ကိုင် ညာလက်ကကြွက်( မောက်စ် ) ကို ဆုပ်ကိုင်ရက် နဲ့ ၊ အသက် ဘယ်အချိန်ထွက်လို့ ထွက်သွားမှန်း ဘယ်သူမှ မသိလိုက်ကြပါဘူး တဲ့..။ သူ့အလောင်းဟာ တောင့်တင်းနေတာမို့ရေခဲတိုက် ပို့ဖို့ ကားပေါ်တင်ရာမှာတောင် အတော်လေး ကသီလင်တ ဖြစ်ခဲ့ရပါသတဲ့ ။သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေ စစ်ဆေးကြည့်ရာ မှာ ၊ သူ့ ရဲ့ အိတ် အတွင်းမှာ နှလုံးရောဂါနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆေးထုတ်ကိုတွေ့ ရပါသတဲ့ ။
(သေတဲ့သူက အတောင့်လိုက် မဲပြာနေပြီ ၊ ရှင်နေသူတွေကတော့ ဂိမ်းအဆော့မပျက် ....ဆက်လက်၍ အသေအလဲ ဆော့လျှက် )
အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာ နာရီပိုင်း နဲ့ အသုံးပြုကြသူအများဟာ လူငယ်တွေ ဖြစ်ကြတယ် ။အထူးသဖြင့် အမိရွှေပြည်ကြီးမှာ အိမ်တိုင်း ကိုယ်ပိုင်အင်တာနက်လိုင်းချိတ်ဖို့သိပ်အဆင်မပြေကြတော့ ဆိုင်တွေမှာ အချိန်ပိုင်းသုံးလေ့ရှိကြတယ်။ အသုံးပြုတဲ့ အကြောင်းအရာများမှာလည်း ဂိမ်းဆော့ ၊ ချက်တင်ထိုင်၊ အစရှိတာတွေ က ရာခိုင်နှုန်းပိုများကြတယ် ။ ကိုယ့်အတွက် တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်း ပညာ ဆည်းပူးဖို့ ၊အချက်အလက်ရှာဖွေဖို့၊ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေဖို့ ၊ နိုင်ငံရပ်ခြား နိုင်ငံပေါင်းစုံနဲ့ မြန်ဆန် သက်သာစွာ ဆက်သွယ်ဖို့၊ အစရှိတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ သုံးစွဲကြသူတွေ လည်း ရှိတော့ရှိပါတယ် ။ နည်းတယ်ပေါ့ ။
စီးပွားရေးအတွက် ဖွင့်ထားကြရတဲ့ ဆိုင်တွေမှာလည်း အဖွဲ့ ဝင် (မင်ဘာ ဝင် ) ရင် ဘယ်လောက် ရာနှုန်းလျှော့ဈေးပေးမယ် ။ နာရီ ပိုများများ သုံး လေ ၊ ဈေးလျှော့လေ ဆိုတဲ့ မက်လုံး များ နဲ့ ဆွဲဆောင် ထားတတ်ကြတာမို့၊ ကိုယ်သုံးနေကြ ဆိုင်တွေမှာပဲဖေါက်သည်သဘောနဲ့ အသုံးပြုလာကြတယ် ။ အင်တာနက်ကဖေး ဆိုင်တွေမှာ စားသောက်စရာ တွေပါ တွဲပေးထားတာမို့တချို့ဆို အိမ်မပြန်ကြတော့ပဲ နေ့ ရော ညပါ လောင်းကစား ဂိမ်းမျိုးစုံကို မနားမနေ ဆော့ကြပါလေတော့တယ် ။ အချိန်ကုန်မှန်းမသိ ၊ လူညောင်းမှန်းမသိ၊ ဆီးချုပ် ဝမ်းချုပ် အညောင်းမိတဲ့ အထိကို အသေအလဲ အသည်းအသန် ဆော့ကြတယ် ။ ဒီလို နာရီပေါင်းများစွာ ကိုယ်လက်လှုပ်မှု မရှိပဲနေရာမှ ရုတ်တရက် ထရပ်လိုက်လို့ ၊ သန့် စင်ခန်း ထဲဝင် သွားလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ သတိလစ် မူးမေ့သွားသူတွေ ၊ဦးနှောက်သွေးကြော သွေးလျှောက်မမှန်လို့လေဖြတ်သွားသူတွေလည်း ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာကတော့ နာရီပေါင်းများစွာ လှုပ်ရှားမှု မရှိပဲ ထိုင်နေရာမှာ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်း အထူးသဖြင့် ခြေထောက်မှာရှိတဲ့ သွေးလှည့်ပတ်မှု နှေးကွေးပြီး သွေးခဲလေးများ( blood clot သို့ မဟုတ် Thrombus) ဖြစ်လာတတ်တယ် ( Thrombosis လို့ ခေါ်တယ်) ။ ဒီသွေးခဲလေးတွေက သွေးပြန်ကြောမှတဆင့် နှလုံးနဲ့အဆုပ်၊ သို့မဟုတ် ဦးနှောက် သွေးကြောတနေရာရာမှာ သွားရောက် ပိတ်ဆို့ နိူင်တယ်(Thromboembolism လို့ ခေါ်တယ် ) ။ ဒီတော့ ရုတ်တရက် နှလုံးခုန်ရပ် ၊ အသက်ရှူ ရပ် ၊ ဦးနှောက်သွေးကြော ပိတ် ၊လေဖြတ် အစရှိတာတွေ ဖြစ်စေနိုင်တယ် ။
ဒါကြောင့် “တန်ဆေး ၊လွန်ဘေး ”ဆိုတဲ့ အချက်ကို သတိပြုကြဖို့ လိုတယ်။ ဂိမ်းဆော့သည်ဖြစ်စေ၊ အလုပ်သဘောအရဖြစ်စေ ကွန်ပြူတာ ရေရှည် အသုံးပြုကြသူများ အား ကျန်းမာရေး မထိခိုက်အောင် ဘယ်ပုံ ဘယ်နည်း နဲ့ သုံးသင့်တယ် ဆိုတာလေး သိသလောက် ဖေါက်သည်ချပါရစေ ။(ကွန်ပြူတာရှေ့ မှာ ၊ ထားရှိပုံ ၊ အညောင်းမမိစေရန် လေ့ကျင့်ခန်း များ ကိုတော့ ဒီပို့ စ်လေး (ကျန်းမာပျော်ရွှင် ဘလောဂင်း နဲ့ ချက်တင် )... မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် ။)
အချိန်ကြာမြင့်စွာထိုင်ပြီး ဂိမ်းဆော့သူများ ၊ ကွန်ပြူတာဖြင့် အလုပ်လုပ်နေရသူတို့ သတိပြုရန် အချက်များ..
(၁) ကွန်ပြူတာ Screen ,LCD ကို မိနစ် ၃၀ ၊ ၄၀ ခန့် တနေရာတည်းသို့အချိန်ကြာမြင့်စွာ စူးစိုက်ကြည့်နေပါက မျက်လုံးကြွက်သားများ တောင့်တင်းလာတတ်ပါသည် ။ထို့ကြောင့် မျက်စိအားစိုက်မှု အကြောအချဉ်လျှော့ရန် အဝေးသို့မိနစ်အနည်းငယ်မျှ ပြောင်းပြီးကြည့်ပေးပါ ။
(၂) မိနစ် ၃၀ ၊ မိနစ် ၄၀ မျှကြာလျှင် တကြိမ် ထိုင်ရာမှ ထပြီး ခြေလက်လှုပ်ရှား ခါးဆန့် ပေးခြင်းဖြင့် ကိုယ်ခန္ဓာတခုလုံး၏ သွေးလေ လှည့်ပတ်မှုကို မှန်ကန်စေနိူင်ပါသည်။
(၃)ကွန်ပြူတာအနီး တွင် ရေ ပုလင်း ရေခွက် ထားရှိပြီး ရေသောက်ရန် မမေ့ပါနှင့်။ ဆီး ချုပ် ဝမ်းချုပ် မဖြစ်ရန် သတိပြုပါ။
(၄) ပါတ်ဝန်းကျင် လေဝင်လေထွက် ကောင်းမွန်မျှတ ရန် ဂရုပြုပါ။ အခန်းတွင်း အလင်းရောင် လုံလောက်ရန်လည်း လိုပါသည် ။
(၅) ညသန်းခေါင်ယံထိ မအိပ်မနား အချိန်ကြာမြင့်စွာ အသုံးပြုခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ပါ ။ကျန်းမာရေးအတွက် အိပ်စက်အနားယူရန်၊ ညဘက်တွင် အိပ်ရေးဝရန် အရေးကြီးပါသည် ။ သို့မှသာ ဦးနှောက်၏ မှတ်ဥာဏ်ထိန်းချုပ်သော Memory chip များ refresh လုပ်ပေးနိူင်သည် ။ အရေးကြီးသော ဟော်မုန်းများ မှန်ကန်အရည်အသွေးပြည့်စွာ ထွက်ပြီး ခန္ဓာကိုယ် ဇီဝဖြစ်စဉ်များကို ပုံမှန် ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်သည် ။ ပင်ပန်းနေသော စိတ် ကိုလန်းဆန်းစေနိုင်သည်။ ကြွက်သား အကြောများ ဖြေလျှော့စေနိုင်သည်။
ွှဤ အကြောင်းအရာများကို ဒီနေရာမှ မှီငြမ်းပြီး မှတ်မိသလောက်ကို မိမိ တတ်သလောက်ဖြင့် ပေါင်းစပ်ရေးသားလိုက်ပါသည် ။
တနေ့ က ရွှေပြည်ကြီးက သတင်းတခုမှာ အင်တာနက်ဆိုင်တွေကို ည ၁၁ နာရီ ကျော်လျှင် မဖွင့်ရ လို့သတ်မှတ်တားမြစ်ထားချက် ကို ဖတ်လိုက်ရသည် ၊ ကျောင်းသားများ စာမေးပွဲနီး၍ ဟု အကြောင်းပြချက် ပါသည် ။လူငယ်များ ဂိမ်းဆိုင် များတွင် အချိန်မတော် သည်ထိမနေစေဖို့ ကန့်သတ်ပေးလိုက်ခြင်းမို့ ဒီသတ်မှတ်ချက်ကိုတော့ ကြိုက်ပါသည် ။
ကွန်ပြူတာ ကြာရှည် အသုံးပြုနေကြသူများ (ဂိမ်းစွဲနေသူများ) ဂိမ်းကြောင့် မဂန့်သွားကြစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည် ။ မိတ်ဆွေအပေါင်း ကျန်းမာ ရွှင်လန်းကြပါစေ။
:kiki : at 2/15/2012 02:55:00 PM